विद्या सापकोटा, (कल्याणपुर -७ नुवाकोट)
तिम्ले जित्न मात्र चाह्रौ
हारिदिए म मुटु जल्दा शितलता दिन भेटिएनौ तिमी
सुचिराखे पुरै जोवन खाली अंगालोमा समेटिएनौ तिमी ॥
साक्षि जुनतारा नै थे
धरापमा माया पुरिए म पटक्कै छेकिएनौं तिमी
जन्मिए हजार सवाल धकेलिए म थोरै चेपिएनौ तिमी ॥
ढुङ्गाको भर माटो भन्थे
लुलिएका मेरा पाइला साहारामा टेकिएनौ तिमी
प्रितको धारमा टुक्रनु टुक्रिए म थोरै रेटिएनौ तिमी ॥
इन्द्रणि रङ्ग प्रेमको
लुटिदै रित्तिए सपना स्रवेनदनामा कहिल्यै देखिएनौ तिमी
सम्हाल्दै पखाले मन हृदयबाट अझै फ्याकिएनौ तिमी ॥
……………………खाली अंगालोमा समेटिएनौ तिमी ॥
बासुजीले सेतो धरतीको खसखस दुनिया सामु मेटाउन खोज्नु भएकोमा आभार भन्छु ।
केही प्राविधिक कुरा :
यो अन्तर्वार्ता टेलिफोन वा Skype बाट लिनु भएको हुनु पर्छ ।
बासुजीको आवज जति स्पष्ट सुनिन्छ अमर भाइको आवाज त्यति बुझिदैन ।
बासु श्रेष्ठ जीले जल्दोबल्दो उपन्यासकार अमर न्यौपाने जीसँग लिनु भएको वार्तालापमा मेरो पाठकिय मनमा उब्जिएका जिज्ञासाहरूको समेत समाधान भएका छन् । म जस्तै आम पाठकलाई यस भलाकुसारीले अमर न्यौपाने जीका साहित्यिक फाँटका धरै कुराहरू जान्न बुझ्न मद्दत हुनेछ ! बासु जी लगायत खसखस डट कम परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद !
वासु जीले उपन्यासकार अमर न्यौपानेसंग लिनु भएको अन्तरबार्ता मलाई पनि सारै रोचक
लाग्यो.यसबाट कतिपय महत्वपूर्ण कुराको उद्घाटन भएको छ.यसबारे मेरा मनमा उठेका केही प्रतिक्रिया म खस खस डट कम मा पठाउने प्रयासमा छु है वासु जी!!
रेडियो नेपालमा रमेश पौडेल जीले न्यौपाने जीसंग कुराकानी गर्नु भएपछिका सेतो धरती बारेका चर्चा परिचर्चाहरु समेत समेटिएको प्रस्तुत खसखस अत्यन्त रोचक लाग्यो । न्यौपाने जी र बासु जी दुबैलाई सेतो धरतीको प्रेमले ओतप्रोत यो पाठकको तर्फबाट हार्दिक बधाई र धन्यवाद !